Ogaden News Agency (ONA) – Xerada Dhagaxlay ee Geegaanka Dhadhaab Ayaa Maanta Lagu Soogabgabeeyay Shir Balaadhan.
Xerada Dhagaxlay ee Geegaanka Dhadhaab Ayaa Maanta Lagu Soogabgabeeyay Shir Balaadhan.
Maanta oo jimca ahayd taariikhduna ay kubeegnayd 3/7/15 waxaa xerada qoxootiga Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab ee Gobolka Woqooyi -Bari Kenya waxaa kusoo gabagaboobay shir aad ubalaadhan ooy kasoo qayb galeen dhamaan faracyada jaaliyada bariga Africa ee magaceeda loosoo gaabiyo JABSO. Kulanka oo socday mudo 2 bari ah ayay kasoo qayb galeen wufuud farabadan oo kakala socotay faracyada Faafan, Barsan, Iftin, Midnimo iyo muftaaxulxoriyo.
Sidoo kale waxaa shirkan lagu casuumay oo fadhiyay ururada arimaha bulshada ogadenia sida ururka midowga dhalinta iyo ardayda ogadenia OYSU, ururka culimo-owdiinka ogadenia UCO, ururka haweenka ogadenia UHO iyo gudiga qoxootiga ogadenia ORCC.
Ugu horaynba kulankan oo qaban qaabadiisa lasoo waday mudo dheer ayaa allaah fadligiisa furmay abaare 8:00 subaxnimo xiliga Dhadhaab waxaana sidii caadada ahayd lagu furay aayado kamid ah qur’aanka kariimka ah iyo wacdi baliiq ah waxaana lasii guda galay ajandayaashii shirka oo aad ufarabadnaa aadna muhiim u ahaa. Waxaa lagudagalay qodob aad uguda waynaa oo magaciisu ahaa iswaraysi iyo kala warqaadasho waxaana si ay xushmad iyo kala danbayni kujirto loo gudagalay iswaraysigii oo qofkasta deegaankii uu wakiilka ka ahaa uu siwaafi ah uga warbixiyay waxaa sidoo kale laga warbixiyay marxalada guud ee halganka shacabka ree ogadenia kuxoraynayaan ciidooda uu marayo. Waxaa qodobadii laga hadlay kamid ahaa:-
1-Habaynta iyo dhiiri galinta kaadirka JWXO oo ah lafdhabarta halganka iyo usamaynta hogaan kaadir iyo dhagaysiga fikirkooda iyo khibradooda.
2- Samaynta ama abuurida ilo dhaqaale oo aan ahayn kuwa hada jira si loosii dardar galiyo howlaha halgan ee kasocda guud ahaan wadanka Kenya.
3- Islaxisaabtan guud oo lagusameeyo dhamaan jaaliyada Bariga Africa iyadoo loolaxisaabtamayo si moomul si farac iyo si shakhsiba.
4-Kala hufida iyo kala habaynta guud ahaan xubnaha katirsan jaaliyada balaadhan ee JABSO.
5- kobcinta garaadka iyo tayada xubnaha faracyada iyo guud ahaan xubnaha jaaliyada Bariga Africa si loo helo xubno bisil oo hal abuur leh iyadoo hoosta laga xariiqay in ay jaaliyada kabuuxaan xubno bisil oo u carbisan howlaha halganka.
6- kobcinta iyo tayeenta saxaafada ururku leeyahay iyo kuwa halganka taageeraba si bulshada looga haqabtiro wararka ay u baahan yihiin iyadoo la amanay saxaafada kuhowlan howlaha halganka ogadenia.
7 ka hortaga iyo burburinta wax kastoo kadhan ah diinteena macaan iyo dhaqankeena suuban.
8 xoojinta cadaalada guud ahaan bulshada iyo gaar ahaan xubnaha faracyada.
9 sii adkaynta kudhaqanka xeerka JWXO iyo midka JABSO iyadoo laqiray in sifiican awalba loogu dhaqmi jiray.
10 wacyi galinta bulshada S.ogadenia oo laga wacyi galiyo celinta ay dowlada Kenya celinayso qoxootiga soomaaliyeed waxaana la isla qaatay in bulshada loofaahfaahiyo waxa ay iyagu yihiin iyo cida ay Kenya celinayso.
11 wada shaqaynta faracyada kumidaysan jaaliyada JABSO iyadoo hoosta laga xariiqay in lasii labanlaabo wada shaqayntii horayba u jirtay oo aad u fiicnayd.
12 kobcinta iyo tayaynta madarasada XIRSI MAHAD oo kajirta xeryaha qoxootiga Dhadhaab.
Guntii iyo gunaanadkii shirkan oo socday mudo labo maalmood ah oo saacaduhuna ay xidhiidh ahaayeen ayaa laga gaadhay guul aad ubalaadhan oo usoo hoyatay shacabka dulman ee ree ogadenia.